cele Archives - Khitamyin
သူမကိုလှောင်ပြောင်သရော်ထားတဲ့ ကာတွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ရွှေရူပါဦး… သူမကိုလှောင်ပြောင်သရော်ထားတဲ့ ကာတွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ရွှေရူပါဦး… သူမကိုလှောင်ပြောင်သရော်ထားတဲ့ ကာတွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ရွှေရူပါဦး… ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်ရွှေရူပါဦးကတော့တပ်မတော်ကိုထောက်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ထဖစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒိလိုတပ်မတော်ထောက်ခံပေးသူမို့ သူမနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တဲ့စစ်သားတွေလဲရှိခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒိလိုရွှေရူပါဦးနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တဲ့စစ်သားတိုင်းတိုက်ပွဲမှာကျဆုံးကုန်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒိလိုသတင်းတွေထွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်မြန်မာကာတွန်းဆရာတွေက သူမကိုသရော်ထားတဲ့ကာတွန်းတပုဒ်ကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒိလိုရေးဆွဲတဲ့အပေါ်သရုပ်ဆောင်ရွှေရူပါဦးကအခုလိုပဲတုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖူးသူမှန်သမျှသေတယ်ဆိုတာ ဒီနေ့အထိမရှိခဲ့ဖူးဘူ အပြင်မှာ အကုန်အလတ်ကြီးတွေဘဲ😎သေမှာမကြောက်လို့လည်း စစ်သားလုပ်နေတာတမင်လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်နေတာအသိအသာကြီးမို့လူပြောလူယုံ ခွေးပြောခွေးယုံဘဲ😂မရှက်ဘူးလား Lol […]
December 30, 2021 Ko Khit 0
သရုပ်ဆောင်လူမင်းနှင့် NLD ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် စစ်ကောင်စီမှ ထောင်ဒဏ်များချမှတ် ဒီဇင်ဘာ(၃၀) ဖေဖော်ဝါရီလ(၁) ရက်နေ့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်ကောင်စီ၏မတရားဖမ်းဆီးခံသူများထဲမှ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အနုပညာရှင် ဦးလူမင်းကို ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ဒေါက်တာမျိုးညွန့်အား ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်အသီးသီးကို နေပြည်တော်စစ်ကောင်စီတရားရုံးမှ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း ၎င်းတို့နှင့်နီးစပ်သည့် […]
ဝီ. ရ သူ နဲ့ ပိုင်တံခွန် (သို့) သင်္ကန်းဝတ်​နဲ့ ကမ္ဘာ​​ကျော်သူ နှစ်ဦး
December 29, 2021 Ko Khit 0
ဝီ ရသူ​နဲ့ ပိုင်​တံခွန် သုံးမတ်သား ဒီမိုက​ရေစီ​ခေတ်မှာ သင်္ကန်းဝတ်​နဲ့ ကမ္ဘာ​​ကျော်သွား​တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကို သတိထားမိပါတယ်။ တစ်ဦးက ဦးဝီရသူပါ။ Time မဂ္ဂဇင်းမှာ “The Face of Buddhist Terror” (ဗုဒ္ဓဘာသာ​ အကြမ်းဖက်မှု​ရဲ့ မျက်နှာ) ဆိုပြီး မဂ္ဂဇင်းထိပ်ဆုံးမှာ မျက်နှာဖုံးရှင်​အဖြစ် ဖော်ပြ​ခံ​ခဲ့ရတာပါ။ […]
December 22, 2021 Ko Khit 0
“ပြန်လာမယ်​မေ​မေ” သီချင်းနား​ထောင်ရင်း Click to Donate ကြဖို့ R ဇာနည်​တောင်းဆို ပြန်လာမယ်မေမေ သီချင်းကိုကြည့်ရှု၍ တော်လှန်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးပေးရန် အဆိုတော် R ဇာနည်ကတောင်းဆိုလိုက်သည်။ “ပြန်လာမယ်မေမေ” ဆိုတဲ့သီချင်း ကို တော်လှန်ရေးအတွက်ပေးဆပ်ရင်း အိမ်နဲ့ဝေးနေကြတဲ့ သူရဲကောင်း အားလုံးအတွက် ခရစ္စမတ်အမှီ ခွန်အားပေးလိုက်ပါတယ်။ C2D […]
December 19, 2021 Ko Khit 0
အခုအချိန်မှာ လူ့အခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ မတရားဖျင်ယားတဲ့ စောက်ဆရာကြီးများကိုလည်း …. အခုအချိန်မှာ လူ့အခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ မတရားဖျင်ယားတဲ့ စောက်ဆရာကြီးများကိုလည်း ယီးပဲနော်။ ခိုင်(၁၄)ခါ ကိစ္စမှာ မလှောင်ပြောင်သင့်ဘူး၊ ဘာဘူး၊ ညာဘူးက တစ်မျိုး။ ဖမ်းမိတဲ့စစ်ခွေးတွေကို မလှောင်ပြောင်သင့်ဘူးတို့။ သတင်းပေးတွေကို မလျှော့သင့်ဘူး ဘာဘူး ညာဘူး။ ပက်ကေ့ချ်လိုက်ကို […]
December 18, 2021 Ko Khit 0
ရင်ခုန်သံတွေ မြန်ဆန်သွားအောင် လှုပ်ခတ် နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေး ကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုတွေကို ရရှိထားသူကတော့ မော်ဒယ် နန်းမွေစံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ဟာ ဆက်စီ Model တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတာပဲ ဖြစ်ပြီး ခေတ်ရှေ့ပြေး ဖက်ရှင်တွေကို လိုက်ဖက် […]
လေးကေကော်ဖြစ်စဉ်ကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ခံစားလိုက်ရတဲ့ ထားထားထက်ရဲ့ မောင်လေးတွေကတော့ တိုက်စရာရှိတာမြန်မြန်တိုက်တော့မည် လေးကေကော်ရောက်ကာစ က တည်းခိုခဲ့တဲ့ နေရာလေး ကျွန်မကို ညီမအရင်းလို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ အကိုတွေ အမတွေ အဆင်ရောပြေကြပါ့မလား ဆိုပြီး စိတ်ပူပါတယ်… တာဝန်ထမ်းနေတဲ့ မောင်လေးတစ်ယောက်ကို စိတ်ပူလို့ လှမ်းမေးကြည့်တော့ အလှမယ်ထားထားထက်နှင့်ရဲဘော်များ ကောင်းတယ် အမ… နို့မို့ဆို […]
နာမည်ကြီးနေ တဲ့ မြန်မာမလေး မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာ ဆန်ဆန် ဝတ်ပြီး လှနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေး မြန်မာမလေး မဟုတ်ပေ မဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် လေးဝတ် ပြီး လှနေ လို့ လူပြော များနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေး ယနေ့ခေတ်မှာ တချို့ မိန်းကလေးတွေဟာ ခပ်ဟော့ဟော့ အဝတ်အစားတွေ […]
December 12, 2021 Ko Khit 0
ပရိသတ်ကြီးရေ နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာ အနုပညာရှင်တွေကလည်း ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ ပူးပေါင်း ရပ်တည်ပြီး အရေးတော်ပုံကြီး အောင် မြင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်း၊ ကိုပေါက်၊ ထားထက်ထက် ၊ဟားငါးကောင် ၊မြနှင်းရည်လွင် ၊ဟိန်းထက် စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း လွတ်မြောက် နယ်မြေအသီးသီးကို ရောက်ရှိနေကြပြီး မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင်တစ် ဦးဖြစ်တဲ့ သီဟထွန်း […]
December 11, 2021 Ko Khit 0
တပ်ထောက်ခံသူကြီး ရွှေရူပါဦးက တာဝန်ယူမှု့နဲ့တာဝန်ခံမှု့မရှိသည့် စစ်ကောင်စီကို လွန်စွာစိတ်ပျက်နေဟုဆို မြန်မာ့တပ်မတော်အသိုင်းအဝိုင်းမှလာပြီး တပ်မတော်အရာကြီးများနှင့် ရင်းနှီးသည့်ဆက်ဆံရေးရှိသော တပ်ထောက်ခံသူ သရုပ်ဆောင် ရွှေရူပါဦးဟာ တာဝန်ယူမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့အပြင် ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို လုံခြုံမှုမပေးနိုင်တဲ့ စစ်ကောင်စီကို စိတ်ပျက်နေကြောင်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှတစါဆင့် ရေးသားလာပါသည်။ ရွေရူပါဦးရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် “အေးချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုမျှော်လင့်ခြင်း” ဟုခေါင်းစဥ်တပ်ကာ အောက်ပါအတိုင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ […]